20 000 tan Khadadka Waxsoosaarka Bacriminta Organic - YiZheng Makiinado Culus Co., Ltd.
Bacriminta dabiiciga ah waa bacrimin laga sameeyay xoolaha iyo digada digaaga iyo qashinka dhirta iyada oo ay ku kulmayaan heerkul sareeya, taas oo waxtar badan u leh horumarinta carrada iyo nuugista bacriminta. Bacriminta dabiiciga ah waxaa laga sameyn karaa haraaga methane, qashinka beeraha, xoolaha iyo digada digaaga iyo qashinka degmada. Qashinkan dabiiciga ah wuxuu ubaahanyahay in lasiihafeeyo kahor intaan loobadalin bacriminta ganacsiga dabiiciga ah ee qiimaha ganacsiga iibka ah.
Maalgashiga qashinka loogu beddelayo hantida gabi ahaanba waa mid qiimo leh.
Telefoon: + 86-13901833873
Khadadka wax soo saarka bacriminta ee dabiiciga ah guud ahaan waxaa loo qaybiyaa daaweyn iyo kala-soocid.
Qalabka ugu muhiimsan ee marxaladda uurka waa mashiinka wax lagu duubo. Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira seddex qashin-qub ah oo muhiim ah: qashin qubka, qashin-qubka socodka iyo qashin-qubka hidda. Waxay leeyihiin astaamo kala duwan waxaana lagu dooran karaa iyadoo loo eegayo baahiyaha dhabta ah.
Xagga tiknoolajiyada granulation, waxaan leenahay noocyada kala duwan ee granulators, sida granulators durbaan Rotary, granulators gaar ah for Bacriminta cusub ee organic, granulators disk, granulators extrusion double Helix, iwm Waxay dabooli karaan baahida loo qabo soo-saarka sare iyo deegaanka dabiiciga ah ee bacriminta wax soo saar.
Waxaan hiigsaneynaa inaan macaamiisha siino khadad wax soo saar wanaagsan oo jawi ahaan ufiican, oo soo ururin kara khadadka wax soo saarka bacriminta dabiiciga ah oo ay la socdaan 20,000 tan, 30,000 tan, ama 50,000 tan ama wax soo saar ka badan sida ku xusan baahida wax soo saarka dhabta ah
Khadka wax soo saarka bacriminta ee dabiiciga ah wuxuu inta badan ka kooban yahay qashin, burburiye, fiicni, mashiinka granulation, qalajiyaha, mashiinka qaboojinta, mashiinka baaritaanka, duubka, mashiinka baakadaha ee otomaatiga ah iyo qalab kale.
►Waxtarka deegaanka ee muuqda
Khadadka soo saarista bacriminta ee dabiiciga ah oo sanadkiiba la soo saaro 20 kun oo tan, ayagoo tusaale u soo qaadanaya xaarka xoolaha, mugga daaweynta qashin saarka sanadlaha ah wuxuu gaari karaa 80,000 mitir cubic.
►Dib u soo kabashada kheyraadka
Tusaale ahaan u soo qaado xoolaha iyo digada digaaga, saxarada sanadlaha ah ee doofaarka oo ay weheliso kuwa kale ee qudaarta leh waxay soo saari kartaa 2,000 ilaa 2,500 kilogram oo ah bacrimin tayo sare leh oo dabiici ah, taas oo ka kooban 11% ilaa 12% maadada dabiiciga ah (0.45% nitrogen, 0.19% phosphorus pentaoxide, 0.6 % potassium chloride, iwm), oo qancin kara acre. Baahida bacriminta ee alaabada beeraha sanadka oo dhan.
Qaybaha bacriminta ee dabiiciga ah ee lagu soo saaray khadka soo saarista bacriminta dabiiciga ah waxay hodan ku yihiin nitrogen, fosfooraska, potassium iyo nafaqooyin kale, oo leh in ka badan 6%. Maadadeedu waxay ka kooban tahay 35%, taas oo ka sarreysa heerka qaranka.
►Faa'iidooyin dhaqaale oo badan
Khadadka wax soo saarka bacriminta ee dabiiciga ah ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa dhul beereedka, geedaha miraha, cagaarka beeraha, cowska dhamaadka sare leh, hagaajinta carrada iyo beero kale, kuwaas oo dabooli kara baahida loo qabo bacriminta dabiiciga ah ee suuqyada maxalliga ah iyo kuwa ku xeeran, isla markaana soo saari kara faa iidooyin dhaqaale oo wanaagsan.
Halsano ee alaabta ceyriinka ah ee bayoolojiyeed ayaa door aad u muhiim ah ka ciyaaraya geedi socodka wax soo saarka oo dhan ee bacriminta dabiiciga ah. Halsano buuxda ayaa aasaas u ah soo saarista bacrimin dabiici ah oo tayo sare leh. Qashin-qubka aan kor ku soo xusnay waxay leeyihiin faa iidooyin u gaar ah. Qashin-qubka iyo jeexjeexayaasha qashin-qubka labadaba waxay gaari karaan halsano dhammaystiran oo nafaqeynta, waxayna ku guuleysan karaan sarreyn iyo halsano sare, oo leh awood wax soo saar weyn. Mashiinka qashinka lagu socdo iyo mashiinka dhalada ee hawo-qaadashada ayaa ku habboon dhammaan noocyada alaabta ceyriinka ah, oo si xor ah ugu shaqeyn kara gudaha iyo dibedda warshadda, taasoo si weyn u wanaajinaysa xawaaraha halsano aerobic
Burburiye alaab-Semi-qoyan oo ay soo saartay warshaddeenu waa nooc cusub oo hal wax-ku-ool ah oo wax-ku-ool ah, kaas oo si aad ah ula qabsan kara walxaha dabiiciga ah ee leh biyo badan. Burburiyey wax Semi-qoyan waxaa si weyn loogu isticmaalaa wax soo saarka bacriminta organic, taas oo uu leeyahay saamayn wanaagsan burburin ku saabsan alaabta ceeriin qoyan sida digada digaagga iyo dhoobada. Booqday Furimaha Dagaalka ayaa si weyn u gaabinaysa wareegga wax soo saarka ee bacriminta dabiiciga ah wuxuuna keydinayaa kharashaadka wax soo saarka.
Ka dib marka alaabta ceyriinka la jajabiyo, lagu qaso qalabka kale ee kaabayaasha ah isla markaana si siman loo walaaqo si loo sameeyo granulation. Mashiinka laba-geeslaha ah ee jiifka ah waxaa badanaa loo isticmaalaa fuuq-celinta kahor iyo isku-darka walxaha budada ah. Mashiinka muquuninta ayaa leh xaglo badan. Iyadoo aan loo eegin qaabka, cabbirka iyo cufnaanta daabku, alaabta ceyriinka ah ayaa si dhaqso leh oo siman loogu qasi karaa.
Nidaamka kala-soocidda (Granulation) waa qaybta ugu muhiimsan ee khadka soo-saarista bacriminta dabiiciga ah. The granulator cusub ee bacriminta dabiiciga ah wuxuu ku guuleystaa kala-sooc tayo sare leh oo isku dhafan iyada oo loo marayo walaaq joogto ah, isku dhac, mosaic, sphericalization, granulation iyo geedi socodka cufan, iyo nadiifnimada dabiiciga ah waxay noqon kartaa mid sareysa 100%.
5. Qalalan oo qabow
Qaboojiyaha wax qaboojiyaha wuxuu ku qaboojiyaa walxaha heerkul gaar ah ka dib markuu qalalo. Iyadoo la yareynayo heerkulka walxaha, biyaha ku jira qaybaha ayaa mar labaad la yareyn karaa, qiyaastii 3% biyaha waa laga saari karaa iyada oo loo marayo habka qaboojinta.
Qaboojinta ka dib, weli waxaa jira walxo budo ah oo ku jira badeecadaha dhammaystiran. Dhammaan budada iyo walxaha aan u qalmin waxaa lagu baari karaa iyada oo loo marayo shaandho duuban. Ka dib, waxaa laga soo qaadaa xammuulka suunka ilaa mashiinka wax lagu qaso oo lagu walaaqo si loo sameeyo granulation. Qaybo waaweyn oo aan u qalmin ayaa u baahan in la burburiyo ka hor intaanay kala soo bixin. Shayga la dhammeeyay waxaa loo qaadayaa mashiinka daahan bacriminta dabiiciga ah.
Tani waa habka ugu dambeeya ee wax soo saar. Mashiinka wax lagu rakibo ee baakadka oo si buuxda otomaatig u ah oo ay soo saarto shirkaddeena waa mashiin baako otomaatig ah oo si gaar ah loogu talagalay loona soo saaray jajabyada qaabab kala duwan Nidaamkeeda xakamaynta miisaanka waxay buuxineysaa shuruudaha uumiga iyo biyuhuba, waxayna sidoo kale u habeyn karaan sanduuqa maaddada si waafaqsan shuruudaha macaamiisha. Ku habboon baakadaha bulk-ga ah ee qalabka bulk-ga, si otomaatig ah ayuu u miisaan karaa, u gudbin karaa oo u shaabadeyn karaa bacaha.